I-Bentley ProjectWise, into yokuqala yokuyazi - i-Geofumed
Epreli, 2013 Zobunjineli, Microstation-Bentley, Ukuprinta kokuqala
Imveliso eyaziwayo kakhulu ye-Bentley yi-Microstation, kunye neenguqu zayo ezicacileyo zamasebe ahlukeneyo we-geo-ingunjine ngokugxininisa ekuqulunqweni kwezobunjineli zombutho, zoshishino, izakhiwo kunye nezothutho. IprojekthiWise ngumveliso wesibini weBentley odibanisa ulawulo lolwazi kunye nokuhlanganiswa kweqela lomsebenzi; kwaye kungekudala u-AssetWise usungulwe oko kukulawulwa kwimbali-zakhiwo njengoko ndichazile kwinqaku yento BIM ukusuka kwindlela yeBentley.
IprojekthiWise ayifumananga nakwiiSpanishi, kakhulu kangangokuba ndingazicingela ukuba le yinqaku yokuqala kwisiSpanish kwesi sixhobo. Kodwa kukho kwi-1995, kwaye kwiinkampani ezinkulu ziye zamukelwa iminyaka emininzi njengesisombululo sokuphathwa kolwazi kumsebenzi osebenzayo oquka i-Architecture, Ubunjineli, Ukwakhiwa kunye neZiseko zoMsebenzi (AECO). Ngoko nantsi inkcazelo ngokukhawuleza kwixesha lexesha le sixhobo.
Imveliso ekuqaleni yayibizwa ngokuba yi-TeamMate, eyakhiwe ngu-Opti Inter-Consult, inkampani yaseFinland apho iBentley inotyalile kwaye ithatha inxaxheba njengentsebenziswano yeqhinga ngenxa yokusondela kumaofisi abo baseNetherlands. Khumbula ukuba ngaphambi kokuya e-Ireland, ikomkhulu kunye nabashushu abakhulu beBentley base Holland.
Yayingunyaka 95, phantsi kwisivumelwano sokuba Bentley wayeza kuba ngomzi kuphela ulijonga njengomhlobo kunye abafana Opti sasisebenza ekuphuhliseni imeko intsebenziswano yena wabizwa ekuqaleni Microstation OfficeMate, ukuba yagidimela 3.1 kunye NT Windows. Emva koko i-96 iqalise i-2 inguqu ebizwa ngokuba yi-Microstation TeamMate ukuba kwiphepha libandakanya ukuhamba okuyisiseko ekufike kuyo umkhiqizo kodwa oko kubaluleke kakhulu into eyenziwa ngoku:
Ukufikelela kwabasebenzisi abaninzi
U-Bentley uyaziqonda ukuba unakho ezandleni zakhe kwaye emva kokuxoxisana kutholwe u-Opti ngaloo nyaka 1996. Eli qela lidibaniswe njengesebe leBentley Systems kwaye lidala imali eyinkunzi yotyalo-mali ethi WorkPlace Systems Inc. ngokubambisana noPramavera (isofthiwe esithengiweyo yi-Oracle kwi2008). Ekugqibeleni Bentley ufumene yonke imali eyinkunzi yaye ukusebenza iimveliso ezimbini: ActiveAsset Planner kunye ActiveAsset ubuzayo ukuba igama njengoko ProjectWise kwinguqulelo yokuqala (2.01) yasekwa kweyoMnga 1998.
ProjectWise ngexesha lee-V7
I-2000 iqalise iProjectWise 3.01 eyayingumphathi wecandelo kunye nokufikelela esekelwe kubasebenzisi kunye neendima: ngokuyisiseko isiseko sokuqala somjikelezo: ukhuseleko.
Kwi-2001, i-ProjectWise i-3.02 ibonakala ngamanqwanqwa obomvu kwiifayile kunye neefayili ze-dwg, iifayili zokudalwa kwamadokhumenti kwaye ingabonakalisa iifayile kwi-Internet Explorer kwindlela ebizwa ngeWEL (Web Explorer Lite)
Kuze kube ngoku, iBentley igcinwe ifom yeV7 ebenomlinganiselo omkhulu wokuba i-16 bits; ngamaxesha I-Microstation 95, SE kunye noJ.
ProjectWise ngexesha lee-V8
Ndiyakhumbula ukuba ndiyazi le nguqulo ye-8.01 kwi-2003, kwiprojekthi yeCadastre eyayisebenzise inqubo ngale ndlela ilandelayo:
Iimephu ze-cadastral zisebenze kwi-Microstation zisebenzisa izixhobo zokucoca iifologi kunye neemephu zeempawu kwiiGographics.
Emva koko i-dgn ibhaliswe kwaye ixhunyaniswe nezicelo eziphuhliswe kwi-VBA, zidibanisa nge-node / umda kwi-Oracle database.
Iifayile ze-dgn zangena kwindawo elawulwayo kunye neProjekthiWise, eyayiqaphela umhla obekubhalisiwe kwaye ulawulwa ukuguqulelwa -nangona ezinye zezo zinto zaziyi-artisan kubantu abahluphekayo kwinguqulelo; Ndiyakhumbula ukuba ezinye zezinto esizisebenzisayo zazibonwa kakuhle kwi-demo eyenziwa eCzechoslovakia, owathi sisebenzise iqonga elingazange li ... kodwa kwakungelungileyo-
Emva koko, ukuba wenze isondlo parcelario, isicelo kwinkqubo yolawulo web, leyo wachaza umxholo osekelwe isitshixo yayo cadastral idaliwe kwaye ukusukela kwimephu nako ukwenza ulawulo akazange khangela ukuba ifayile DGN, ukukhulisa isakhiwo esithile kunye ne-geolocate, ukwenza isondlo; Okwangoku i fayile ayikwazanga ukuyichukumisa ngenxa yokuba ilayishwe ngumsebenzisi.
Emva kokulondolozwa, i-DNG iya kungena kwaye ikhulule inguqulo.
Ukongezelela, script yonke imizuzu 20 kuyo zonke iifayili kancincane, zikhutshelwa inguqulelo entsha yaye kutshintshwa Umpapashi kumncedisi GeoWeb ngokuba ngelo xesha ndiya ndandingakwazi ukufunda izintlu ProjectWise, ngoko ke kufuneka kutshintshwa ngale ndlela ngenxa Umshicileli unokuqhubeka nokubiza i fayile edibeneyo ebhaliswe kwisihlomelo. Hamba, kodwa yinto ekhoyo. Emva Bentley iya kulwelwa kunye Java for web umbukeli Publisher, wakha kumboniseli ActiveX: VPR (View Shicilela Redline) apho yileyo embi kakhulu kuba wabaleka kuphela Internet Explorer uze ufake ixesha kuqala umsebenzisi ibithwele kwaba ntlekele; kodwa yinto eyodwa evumelekile ukuba icele ukugcinwa kwesigcaziso kumbukeli, odale ifayile kunye nokongezwa kwe-redline (.rdl) edibene kwintengiselwano.
Mandivume ukuba amandla amakhwenkwe abakuloo ndawo yophuhliso yaba kakhulu, ngokungathi loo ngoku zibonakala impumelelo abathobekileyo, ngexesha kwakufuna joint elungileyo nentsangu ukuze kufikelelwe ngobugcisa kule mihla. Ukulinganiselwa abancedisi backup kunye neenkonzo web ngenkani yesiqhelo ezinzulwini zobusuku amphakamisele umncedisi sisipili omnye ukwenza ukhuphelo kwi tape de 6 mna kokubuyela avuke umncedisi yesicelo.
Kwakhona iProjekthiWise evunyelwe kwiiyunithi ezimbalwa ukulawula ukugeleza kwenzeka kwimephu ngaphambi kokubhalisa; ngubani owawuhlula ngayo, ngoluphi uhlobo, ngaluphi umhla, ngubani owenza umgca ... njl njl Ngefutshane, imethadatha endala.
Oku kwenziwa ngenxa yemisebenzi yokuba le nguqulo ibhalwe kwi-2003: Umzila woPhicotho, iiNkcukacha zoLwazi lweMisebenzi kunye neNkqubo yokuSasazwa. Ukongezwa ngokuphuculwa kwe-Web Explorer Lite, amaxwebhu ahlanganiswe ne-geomería ebhalisiweyo, njengamafayili e-pdf okanye ezinye iimephu kunye neWindows Preview.
Ku-2004 kwafika inguqulo ye-8.05, enefuthe lokubonisa i-dgn, ii-Thumbnails kunye nokuphuculwa kwe-text search. A Kulusizi ukuba oku elula kakhulu ukuphumeza, ezifana iCartridge lwendawo ekukhuthazeni Bentley babungelulanga kwaye kwaba nzima ukuya ngokuchasene nemigangatho yangoku kukhuthazwa kunye zolwazi lwesithuba inkxaso kunye neenkonzo WMS / WFS; oko uBentley akuphikelela ekusebenzeni ngeProjekthiWise kwaye kungekhona nge-GeoWeb Publisher eyenza ukuba ifumaneke kwiProjekthiServer kunye nokufika kwefayile ye-idpr.
Ndiyinto entsha njengokuba bekuyizolo izolo, nangona kwakucasulayo ukuba ndifune ukuyichaza ngugqirha owafika endaweni yam esikhundleni sokuguquka kwezopolitiko ... nangona uqeqesho lwakhe lwaluyinkonzo yamazinyo kwaye wayenomlinganiselo we-master in therapy.
Mhlawumbi le nkxalabo sizathu sokuba kutheni ixesha lokubhala ngethuba lokuqala ndithetha ngeProjekthiWise. Ngokuqinisekileyo uFeud kuphela uyazi.
Kwakuyiminyaka emibini ngaphambi kokuba iProjekthiWise ikhishwe into entsha, kwenzeka ntoni kwi-2006 xa i-XM 8.09 ibonakala. Kule nto, i-Microstation yayiphinde yaphuhliswa ngokupheleleyo ngobuso esibubona kude kakhulu; ngelixa ProjectWise ulawulo lweprojekthi oluhlangeneyo kunokuba zokugcina, zokuyixakatha SharePoint aze emva koko ukuphatha nge isakhiwo XFM elawulwa zokusebenza oko Geographics isakhiwo endala bakhohlwa iiprojekthi. Kwakuxabiseke ukuba ukususela ngoku kwi-dwg kunye ne-dxf ingafundwa ngokufanelekileyo.
Khumbula ukuba i-XM yayiyilingo leBentley ukuya kwisinyathelo esilandelayo; kodwa oko kwabavumela ukuba babuyisele kwisantya malunga nesisonke sezicelo ezide zize zaphuhliswa kwi-Clipper; I-Robust kodwa ngombonakaliso womsebenzisi unqunyelwe kwi-C ++, C # kunye ne-.NET.
Ngomsi V8i Bentley ubeka imbono yakhe elandelayo, ukucinga nge-BIM, kwiziseko zophuhliso. Ngale nto kuvela ingcamango Mzekelo, apho iWindowsWise ithatha indima ebalulekileyo kunye nokulawulwa kwedatha equkethwe kwiifayile ze-dgn, ezazisetyenziselwa ixesha elide kwi-xml nodes kodwa ezingakhuliswa njengezixhobo zedatha. Yiyo ndlela oku kulandelwa ngayo amanyathelo alandelayo emva kokuhlanganiswa kwe-AEC + Operation eboniswe kwixesha eliphakathi kwi-AssetWise:
ProjectWise V8i (8.11). Oku kuqaliswe kwi-2008, kwaye apha ukudluliswa kwedatha kuqala ngeenkonzo zewebhu kwizinga lokubonakala, kwaye umbonisi weempawu endaweni yokubonisa umbono obonisiweyo ubonisa izinto ngeWeb View View and Navigation Space. Ukufunwa uba kakuhle kuba isebenza kuphela idatha XML nokufikelela kungekho elide le window elithile endala beseka propati .dll client kodwa zingafumaneka ngezicelo particularized ukuba ukucutha de kwikhonkco. Ngokuqinisekileyo, ngeli nqaku i-model ingafumaneka kwi-pdf, dgn, dwg okanye ifayile efinyelelweyo esuka kwi-Microsoft Excel okanye i-Outlook imeyile.
Khetha i-Series 1 iqaliswe kwi-2009, ukuqonda i-dwg yenguqu yakamuva ye-AutoCAD 2010 kunye nokwakha iipropati ze-xml nodes zihambelana nomqambi we-data-model. Kwakhona i-Redline endala iyenzeka ukuba iphuculwe kwi-Navigator markups.
Khetha i-Series 2 iqaliswe kwi-2011, kunye nenkxaso yokusebenzisana ne-AutoCAD kunye neefayile zokubuyisela ii-32 kunye ne-64 bits. Kulo version ukudluliselwa kweefayili obubobu uba imbali kwaye yonke into nge iinkonzo web, isebenzisa i propati ukuba uzisa le 8.11.07 (Umlawuli Web Part, Granular Administration) bookmark us siba mmangaliso nokuba ngendibaniso ezicothayo.
Inguqulo entsha, Khetha Series 3 2012 yaqalisa ngoMeyi ngenkxaso lweenkobe kubancedisi 64 amasuntswana, yaye xa beqala ukubonisa izicelo for Android, iPad ne Windows amacwecwe. Ukudluliselwa nge-intanethi kufaka phakathi amafu, ubuqili obunamandla obuvela kumncedisi kunye nenkxaso yeCitrix.
Kwaye ke, yiyiphi iProjekthiWise?
Ekugqibeleni, uBentley wakwazi ukukholisa abathengi abaninzi abasebenzisa iimveliso zabo, kunye nabanye abatyeba ukuthenga izicelo eziye zazisombulula iingxaki ezifanayo kodwa zabaxhasi beqhinga, ukwakha inkqubo apho umsebenzi wokusebenzisana ufezekiswa kumjikelezo we-Architecture, Engineering, Ukwakhiwa kunye nokuSebenza (AECO). Ngokungafaniyo nezinye iindlela zolawulo xwebhu, oko ligxininisa kuyilo nolwakhiwo kweeprojekthi zezibonelelo ezihlangeneyo njengoko kusebenza ndlela phantse zemveli:
Iprojekti yenzelwe, isebenzisa isofthiwe egcina idatha kwi-I-Model nangona imidwebo kuphela kunye nokufaniswa kwe-georeferenced kwenziwa,
Ulwaphulo olusebenzayo kwaye uhlalutyo lwe-geotechnical lufakiwe
Yonke into, isakhiwo sakhiwo, i-electromechanical design ... yonke into ihamba ngokuhamba phakathi kwabantu abaninzi.
Akukho zicwangciso zeetafile okanye iifayile ngeposi okanye kwiDropbox, kuphela umsebenzi wokusebenzisana kwiifayile ezibonakalayo ze-dgn. Kodwa umlingo use-XML eqhelekileyo kwi-Model.
Kwaye iProjekthiWise yenza umsebenzi wokudibanisa amaqela kwiindima zabo kunye nolwazi olufanelekileyo. Ngenxa ingqiqo efanayo xa enza archaically, ekwakheni iirekhodi engekagqitywa kwi ugqatso lokuthenga umsebenzi, kodwa uphumezo kamva kwaye ngoku ukusebenza; kunye nokwahlukana komsebenzi ngeengcali, ukuphinda kusetyenziswe umxholo kunye nempendulo enamandla.
Yingakho i-ProjectWise engaziwa kakuhle kumsebenzisi oqhelekileyo, kuba iinkampani ezinkulu zinomdla kulolu hlobo lwezicelo: Kucatshangelwa ukuba i-40% yosuku lomsebenzi weinjini ingasetyenziselwa ukufuna nokuqinisekisa ulwazi oluthile, iifayile zokusetyenziswa kwaye usenokungabaza ukuba ungeyiphutha le data yasekuqaleni. Kuba zobunjineli usebenza apho isivingco ixabisa $ 25,000 kunye umonakalo imele ilahleko enkulu ... okanye ukufumana isakhiwo apho emiseleni kuthetha ukutshintsha ekuyilweni saqalwa ukuba slab isiseko aseludongeni umkhusane ... ngoko ProjectWise imele utyalo ezixabisekileyo.
Ndandibona ukuba esi sixhobo ganiswe idrafti registry umhlaba wesizwe, kwilizwe apho badwelisi benkqubo izikhonkwane bakwazi ukufumana ngaphezulu kunaye ngexesha lakhe; Emva koko andingazi malunga nezinye iprojekthi. Kodwa xa kufikwa imida yengingqi, wamangaliswa kukubona ProjectWise isetyenziswa kumazwe 92:
I-72 yeenkampani ezinkulu zobunjineli ze-100 ezichongiweyo Ingxelo yezobunjineli I-100 ephezulu.
I-234 yeenkampani zehlabathi ze-500 ezinezakhiwo ezinkulu zophuhliso, kubandakanywa noluntu kunye nolwangasese.
I-25 yamasebe e-50 okuthutha eMelika.
Ngoko ... ngubani owaziyo ukuba sithetha ngakumbi ngeProjekthiWise phezu kwexesha.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-32 kwiminyaka kamva, qhagamshela iingcingo, ujikelezo olufutshane
Post Next Ixabiso kunye neeLayisenisi kwiinguqu ezintsha ze-AutoCAD 2014Okulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi- "Bentley ProjectWise, into yokuqala ofuna ukuyifumana"
UJaun García Rojas uthi:
Ndiyifumana ingcamango yokuhlanganiswa komsebenzi kakhulu.
Ngaba unemveliso yesampula, umzekelo kunye nayo yonke imisebenzi esetyenziswe kwiprojekthi, ukwazi ulawulo lwe-PW, iziphumo zalo kunye neendlela ezihambelana nazo? Ukuba kunjalo, thumela lo mzekelo wokusetyenziswa. Ndiyabonga
Ungathumela ulwazi oluninzi, eli nqaku linomdla kakhulu!